Ankizivavy maro no mijaly amin'ny fitomboan'ny volo be eo anelanelan'ny volomaso. Amin'ny tranga tsy fahita firy, ny olana toy izany dia manondro olana ara-pahasalamana lehibe, ohatra, ny aretina fihary atodinaina polycystic. Saingy, amin'ny fitsipika iray, dia vokatry ny fototarazo izany. Mba hanamaivanana vetivety an'ity olana ity dia hovonjy ireo tweezers, savoka savoka na menaka fanalefahana. Ho an'ny fanesorana volo tanteraka, diniho ny fanesorana volo elektrika na fanesorana volo laser.
Azo resena ve ny cellulite?
Ny vehivavy dia tsy te-hahita hodi-boasary na volam-boaloboka fa tsy ny vodiny. Mampalahelo fa tsy mahalala famindram-po na iza na iza ny cellulite. Ny hoditra lasa tsy dia manintona ary tsy mitovy sy be volo.
Ny fisorohana sy fitsaboana mahomby indrindra dia ny fanatanjahan-tena tsy tapaka. Ary ny menaka fanosotra na menaka fanontana matetika tsy manampy. Misy ny fomba fanao toy ny mesotherapy, fanorana anti-cellulite, famonosan'ny vatana.
Fa maninona aho no mitsiky?
Ho an'ny maro amintsika, ny blush dia mifamatotra amin'ny valin'ny vatantsika amin'ny lafin'ny tontolo iainana isan-karazany, toy ny henatra noho ny henatra na henatra. Saingy, raha rakotra tasy eo amin'ny handrina, ny takolaka na ny saokanao ny hoditra, dia azo atao izany rosacea... Aretin-koditra maharitra izy io ary tsaboina amin'ny pilina na menaka.
Fa maninona no lasa volondavenona aloha ny volo?
Raha tanora ianao ary ny antsasaky ny volonao dia efa fotsy, tokony ho mailo ianao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny volondavenona aloha dia manondro ny tsy fahombiazan'ny fihary tiroida na ny pigmentation.
Ny antony mahazatra indrindra dia ny fandovana. Soa ihany, ny volo volondavenona amin'ny mbola kely dia tsy midika hoe antitra noho ny hafa ny vatanao.
Avy aiza ny mony amin'ny feny?
Ity dia kileman-koditra antsoina hoe keratosis follicular. Tsy mampidi-doza io toe-pahasalamana io, fa tsy manintona loatra. Ny fisehoan'ny keratosis dia mitranga amin'ny feny, lamosina ary lamosina. Io aretina io, raha ny fitsipika, dia maharitra ela, ary manjavona amin'ny faha-30-35 taona. Mandra-pahatongan'izany dia azo atao ny mampihena ny fisehoan'ny aretina amin'ny alàlan'ny vokatra mahamando tsara ny hoditra.
Avy aiza ny marika mihinjitra?
Rehefa mivelatra be ny hoditsika mandritra ny fiakaram-bidy na, ny mifanohitra amin'izany, ny fatiantoka mahery, mandritra ny fitondrana vohoka, dia afaka miforona ny tavy, na antsoina hoe "marika mihinjitra". Voalohany, mena ny lokon'izy ireo, nefa tonga fotsy fotsy.
Matetika, ny marika mihinjitra dia miseho eo amin'ny vodin-trondro, feny, lamosina ambany, kibo ary tratra. Tsy azo atao ny manala azy ireo, saingy azonao atao ny manamarika azy ireo - amin'ny alàlan'ny fandidiana na ny fikolokoloana simika. Matetika dia tsy misy ilana azy ny karazan-menaka sy menaka fanosotra rehetra.
Fa maninona no mipoitra ny fofonaina?
Rehefa avy miborosy nify isan'andro, amin'ny fampiasana kofehy nify manokana, mbola misy ifandraisany ve ny fofona ratsy? Mety manana aretin'ny siligaoma ianao, vava maina ary aretina sinus. Fa azo inoana fa tsy maintsy manova ny sakafonao ianao. Tsy misy na dia iray aza, na ny fanafody nify lafo vidy indrindra aza dia hanampy handresy ny fofona tongolo na tongolo lay.
Laser peeling: hevitra
Biorevitalisation na mesotherapy: izay no tsara kokoa
Ahinjiro eo aoriana: ny fahazoana ny antony
Ny fanafody Keratolytic: anarana sy fomba fampiharana
Fanasokajiana ny periodontitis, antony, diagnostika, fitsaboana
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,434.